Miara-dalana… : “Voambolana” sy ny “Labdihy” | NewsMada
Miara-dalana… : “Voambolana” sy ny “Labdihy”
Tanterahina amin’ny toerana telo eto an-dRenivohitra (Ankadikely, Ankadikely Ilafy ary Manjaka) ny “Festival Voambolana” andiany fahatelo sy ny “Labdihy” andiany fahafito, tapany faharoa. Raha tsiahivina, natao ny 1 hatramin’ny 12 aogositra lasa teo ny tapany voalohany amin’ity hetsika “Labdihy” ity.
Samy mahakasika ny tontolon’ny dihy ankehitriny ireto hetsika roa ireto, izay iarahan’ny kaompania Rary sy ny Dihyarivelo. Fotoana iray hanaovana fikarohana sy fandalinana bebe kokoa mikasika ny dihy ny “Labdihy”. Tsy mifanalavitra fa vao mainka aza mifameno amin’izany koa ny “Festival Voambolana”.
Mikasika ny “Labdihy” manokana, hisy ny mpanao soradihy avy any Maorisy hanohy ny fiofanana sy ny famoronana na “résidence de création”, mandritra izao hetsika izao. Efa natomboka tany Maorisy izany, ny volana mey sy jona lasa teo. Eo koa ireo nanatrika “résidence de création” nandritra ny “Festival 321”, tamin’ny taon-dasa.
Ankoatra ny fiofanana arahim-pamoronana, ao anatin’ny fandaharam-potoana, mandritra ireto hetsika roa ireto ny fampisehoana maimaimpoana, ny poezia, ny fampirantiana samihafa ary ny mozika, mazava ho azy. Tsy hifarana moa izao hetsika izao raha tsy ny asabotsy 7 oktobra izao.
Hatreto, mbola voatazona ireo fandaharam-potoan’ny seho ankalamanjana, mandritra ny “Festival Voambolana” sy “Labdihy”. Miankina amin’ny tompon’andraiki-panjakana ny mety hamindrana izany anaty trano, araka ny nambaran’i Géraldine, anisan’ny mpikarakara. Etsy ankilan’izay, nofoanana na nahemotra ireo hetsika ara-javakanto hafa, saika hatao eto an-dRenivohitra sy ny manodidina, noho ny fihanaky ny aretina pesta. Anisan’izany, ohatra, ireo fampisehoana ao anatin’ny “Festival Madajazzcar”, araka ny nambaran’ny mpikarakara izany.